Maleeshiyaadka Gal-Mudug oo Jabiyay Heshiiskii Gaalkacyo ,weerarna soo Qaaday – Radio Daljir
Diseembar 3, 2015 6:15 b 0
Somalia, December 03, 2015-(Daljir)_Â Maleeyshiyaad taabacsan maamulka Galmudug ee Koonfurta magaalada Galkacyo ayaa maanta weerar kusoo qaaday ciidamada ammaanka dowladda Puntland ee gobolka Mudg, waxaana ay sidoo kale madaafiic kusoo tuureen xaafadaha magaalada ee ay kusugan yihiin dadka rayidka ah.
Madafiic iyo hoobiyayaal laga soo tuurayey dhanka xaafadda Baraxley ayaa kusoo dhacay qaar kamid ah xaafadaha waqooyiga, Bariga iyo Galbeedka Magaalada Galkacyo, waxaana ay arrintaasi noqonaysaa in maamulka Galmudug uu jebiyey heshiiskii shalay lagu gaarey Galkacyo.
Ciidamada ammaanka dowladda Puntland ayaa bilaabay inay adkeeyaaan ammaanka magaalada, sidoo kalena ay difaacaan dadka shacabka ah ee kunool xaafadaha magaalada, waxaana ay howlgalo kooxahaasi lagu baacsanayo ka bilaabeen xaafada Baraxley.
Weli lama shaacin khasaaraha dhabta ah ee kadhashay weerarka maanta kadhacay magaalada Galkacyo labada dhanba, waxaana jira warar sheegaya in xarumaha madaafiicda lala beegsaday ay kamid yihiin xafiiskii Tvga Puntland ee gobolka Mudug sida aan kasoo xiganey qaar kamid ah howlwadeenada xafiiska.
Magaalada Galkacyo ayaa waxaa weli kusugan wafuudii heer caalami iyo heer Soomaaliya ee kuhowlanaa dhexdhexaadinta Puntland iyo Galmudug, waxaana ay goobjoog u ahaayeen madaafiic laga soo ganayey xaafadda Baraxley.
Cali Xaaji oo Dhaliilay habka loo Maray heshiiskii Gaalkacyo